Gbasara Anyị - Hebei Ewin Enterprise Co., Ltd.
Akpa Shoppingzụ ahịa
Ndị Na-abụghị Ihe
PET eji egwughari
Akpa / akwukwo nri
Akpa ihe omuma
Mmeputa Neo Loose
HEBEI EWIN ENTERPRISE CO., LTDguzosiri ike na 2003, Onye nwe ya: nwere ahụmịhe afọ 26 na akpa. Isi ihe na akpa ahịa, nkwalite na ihe onyinye. Companylọ ọrụ a na - eto ngwa ngwa ma na - ewusi ike, ọ bụkwa ugbu a bụ ụzọ na - eweta onye ọ bụla maka ndị ahịa si Europe na USA
Na katalọgụ ndị a na ihe ndị ọzọ, enwere ike ịhazi ihe niile iji tinye akara ụlọ ọrụ na njiri mara ụlọ ọrụ gị. Anyị na-ebunye ihe OEM ma ọ bụ ihe dị iche iche n’ime gị. Anyị dị mma na idobe usoro mbupu na njikwa mma, yana ọnụahịa dịkwa mma.
Na Ewin, anyị na-enye ndụmọdụ n'efu, anyị nwere ike nye ndụmọdụ maka nrụpụta, mbupu na ihe mmefu ego maka ọrụ gị. Ebumnuche anyị ịnye gị ma ọ bụ chọọ gị ndị na - emepụta ngwaahịa kachasị mma dabara na ngwaahịa dị mma, ntụgharị aka nri yana ọnụahịa kachasị asọmpi nke kachasị mma maka mkpa gị.
Anyi no n’akuku gi mgbe niile ile anya na I gha inweta ihe I nyere n'iwu.